Xukuumadda Somaliland oo Cambaaraysay hadalkii ka soo yeedhay Madaxweynaha Soomaaliya oo La Xidhiidhay Heshiiska DP World – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Xukuumadda Somaliland ayaa cambaaraysay hadalka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliya oo kaga hadlay heshiiska Somaliland la gashay shirkadda DP World. Xafhayeenka madaxtooyadda Somaliland oo shir jaraa’id ku qabtay madaxtoyadda ayaa sheegay in hadalka madaxweynaha Soomaaliya uu yahay riyo iyo indho-adayga ah.
Jamhuuriyadda Somaliland waxay si weyn ula socotaa in Xukuumadda ka talisa Villa Somalia oo uu ugu horreeyo M/weyne Xasan Shiikh Maxamuud ay si toos ah iyo si dadbanba gacanta ugula jiraan arrimo ka dhan ah nabadda, wada jirka, horumarka, dhaqaalaha iyo siyaasadda Qaranka Somaliland. Waxaannu ognahay in ay soo abaabulaan kooxo ay ugu talo-galeen inay khal-khal geliyaan nabadda iyo deganaanshaha Somaliland, isla markaana ay carqaladeeyaan tallaabo kasta oo uu Qaranka JSL xagga wanaagsan u qaado.
Sidoo kale, Dawladda Somaliland waxay si adag u cambaaraynaysaa hadallada xaqiiqada ka fog ee ka soo yeedhay Madaxweynaha Xukuumadda Soomaaliya ee uu ku sheegay in Dekedda Berbera ay tahay hanti ay leeyihiin waxa uu ugu yeedhay ‘Qaran Soomaaliyeed iyo Ummad Soomaaliyeed’. Hadalladani waxay markhaati cad u yihiin fara gelinta qaawan ee joogtada ah ee ay Xukuumadda ka talisa Villa Somalia ku hawso dalka, dadka iyo danaha Jamhuuriyadda Somaliland.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Hogaanka Daladda Guud Ee Jaaliyadda Somaliland ee Yurub